Afganistana: Mpianatra Eny Amin’ny Lisea Nahita Raikipohy Matematika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2012 7:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Español, srpski, Ελληνικά, Swahili, اردو, Português, English
Ity misy fiovana raha toa ianao ka tsy zatra namaky irony tantaram-pahombiazana mikasika ny fanabeazana any Afganistana irony. Nilaza ny Foiben'ny Siansa tao Kabul tamin'ny 30 Jona 2012 fa Khalilullah Yaqubi, mpianatra iray avy amin'ny lisea avy any amin'ny Faritanin'i Ghazni no nahita samirery ny raikipohy matematika azo ampiasaina hamahàna ny olana fitadiavana isa iray tsy fantatra amin'ny fampimiràna ambaratonga faharoa ‘. Mpianatra amin'ny dingana faha-iraikambinifolo ao amin'ny Lisea Al-Beruni High School any Nawabad, any amin'ny manodidina ny tanànan'i Ghazni i Khalilullah.
Hoy i Khalilullah miresaka mikasika ny raikipohy:
Mbola tsy hitako tany anaty boky mihitsy ity raikipohy ity taloha. Tsy nanana fototra mihitsy aho, na koa naka tàhaka tamin'ny aterineto. Ezako izaho samirery izy ity. Afaka mamaha olana amina ambaratonganà fampimiràna isika amin'ny alalan'ity raikipohy ity (sic).
Nandray tsara ny vaovao ho famantarana ny fivoaran'ny sehatra fampianarana Afgana ny mpampiasa Twitter sasany. Nibitsika toy izao ohatra i Mulex:
Hay! Vaovao hafakely avy any Afganistana. Famantarana ny fivoaran'ny rafi-pampianaran'izy ireo.
Nanoratra toy izao ny mpampiasa Twitter hafa, i Jasur Ashurov (‘mpifindra-monina naka toerana avy any Asia Afovoany’), :
Tsy mahazo vaovao tsara lalandava avy any #Afganistana izany ianao. Izany no tena mahafaly ahy mamaky azy ity.
Hoy izy nanampy [ru] sy nanova kely ny tenin'ilay Rosiana siantifika sady Poeta:
…afaka miteraka ny Newton-ny sy ny Platos-ny azy irery ny tanin'ny Afghan…
Misongadina manokana ny fahombiazan'ny mpianatra raha oharina amin'ny hasarotan'ny zava-misy atrehan'ny sehatry ny sekoly any amin'ny faritanin'i Ghazni. Nanakatona sekoly maro tany amin'ilay faritany ny mpikambana sy mpandala ny Taliban. Na izany aza, vao haingana dia mponina teo amin'ny 400 tamin'ny iray tamin'ireo distrikan'ny faritany no nivadika tamin'ny vondron'ny fondamentalista ka nahavita nanokatra sekoly 81 tamin'ireo 83 teo amin'ny faritra.
Amin'ny ankapobeny, nisy fivoarana ny seha-pampianarana any Afganistana hatramin'ny nialan'ny Taliban tamin'ny 2001. Sekoly eo amin'ny 5.000 eo no voatsangana (pdf) manerana ny firenena nanomboka ny 2003. Na izany aza, mbola maro amin'ireo sekoly ireo no tsy ampy fitaovam-pampianarana manaraka ny toetrandro ary manana olana eo amin'ny tsyfahampian'ny mpampianatra tsara ofana. Fanampin'izany, vao haingana no nisy maro ireo sekolin-jazavavy notafihan’ ny fondamentalista izay manohitra ny fianarana ho an'ny vehivavy eo amin'ny firenena.
Manoritra ny rafi-pampianarana any Afganistana toy izao manaraka izao i Dilawar Sherzai eo amin'ny Outlook Afghanistan:
Iray amin'ireo firenena maro izay tsy manome ny lanja tokony ho izy ny sehatra fampianarana ny firenentsika Afganistana. Antony iray amin'izany ny fikorontanan-dava tsy miato manempotra ny fiarahamonina. Ny ady sy ny disadisa – eto amin'ny firenena, eo amin'ny faritra ary iraisam-pirenena – izay mampiasa ny tanin'i Afghan ho toy ny lampihazo (teatra) ho azy ireo ka nahatonga ny sehatra fampivoarana ara-tsosialy sy fampianarana ho sempotra tena sempotra. Azo isaina ny hamaroan'ny ady sy ny korontana manelingelina ny fametrahana rafi-pampianarana mahomby nanomboka tamin'ny fananiham-bohitra nataon'ny Sovietika tamin'ny 1979. Ny olana, ny tena fototra raha zohina, dia ny teboka ifantohan'ny sain'ny olona kokoa fa tsy ny rafi-pampianarana loatra.
Na dia eo aza ireny hasarotana maro ireny, maro ireo Afgana no tafita lasa manam-pahaizana, indraindray aza dia nampiana-tena aza. Tamin'ny Desambra 2011, mponina iray manan-talenta avy any Ghazniiray hafa koa, izay tsy manana fiofànana na fitaovana manokana, no nampanidina fiaramanidina izay namboariny avy amin'ny alalan'ny fikirakirana fitaovana avy amina posiposy sy fiara Toyota efa niasa teo an-tokotaniny.
Nanampy tamin'ity lahatsoratra ity ihany koa i Alexander Sodiqov.